IMIPHEZULU YEETAFILE ZEGRANITE EMHLOPHE (IMIBALA KUNYE NEZITAYILE) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Imiphezulu yeetafile zeGranite emhlophe (Imibala kunye neZitayile)
Imiphezulu yeetafile zeGranite emhlophe (Imibala kunye neZitayile)
Wamkelekile kwigalari yethu ebonisa imiphezulu yeetafile zegranite emhlophe.Imiphezulu yeetafile zegranite emhlophe lutyalo-mali olunobulumko kulo naliphi na ikhaya. Ayongezi kuphela into enomtsalane ekhitshini lakho, kodwa ikwabonelela ngokusebenza kunye nokuzinza okungekho elinye ilitye lendalo elinokugqitha. Fumana ukuba yeyiphi imibala emhlophe yegranite oyithandayo yeyona nto ilungileyo kwikamva lakho lekhitshi. Ngolwazi oluthe kratya ndwendwela eli phepha ukuze ufunde eyethu imiphezulu yeetafile lenyengane Isikhokelo sokugqibela.
Ngokubanzi, inyengane lukhetho oludumileyo lokuseta kuba zizinto ezinamandla ezinokumelana nokuwohloka kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla. Ifumaneka ngokubanzi kwimarike eyenza ukuba izinto zibe lula kuyo nayiphi na iprojekthi. Iyahluka kwaye inokusetyenziswa nakweyiphi na uyilo njengoko ifumaneka kuluhlu olubanzi lwemibala kunye neepateni. Phakathi kwezinye izinto, ikwanjalo, ukunganyangeki kwebala, ukunganyangeki ekuqaleni, ukumelana nobushushu kunye nolondolozo olusezantsi.
Sebenzisa igranite emhlophe kwiitafile zekhitshi
Yintoni eyenza igranite emhlophe ibe yeyona ithandwayo kunye nenqwenelekayo yokukhetha imiphezulu yeetafile zegranite? Zininzi izibonelelo zokuba kutheni bekhetha ngokufanelekileyo ikhitshi lakho:
Ubuhle obungapheliyo. Igranite emhlophe iyafumaneka kwiindidi ezahlukeneyo, iipateni kunye nemibala, ukusukela kumhlophe wekhephu ukuya kumthunzi weendlovu ococekileyo. Ubukho bemithambo kunye nemithambo ehlelwe kwiipateni ezahlukeneyo ibenza babonakale. Nokuba kungangumahluko ocacileyo okanye umahluko ocekeceke, igranite emhlophe yongeza uphawu ekhitshini lakho kwaye yenza indawo ephambili ekugxilwe kuyo ekhayeni lakho. Inayo i-classical flair engapheliyo ekhanyisa nangayiphi na indawo, inika ukucoceka okucocekileyo ekhayeni lakho. Inobunewunewu, inesitayile esigqibeleleyo, inobuqili kwaye ayisokuze iphelelwe lixesha.
Yenza indawo ebanzi. Njengommiselo ngokubanzi kuyilo, imibala ekhanyayo ithambekele ekwenzeni nasiphi na isithuba sibonakale sikhulu. Ukuyisebenzisa njengesixhobo sokubala kubangela ukungaqondakali kwendawo evulekileyo nomoya. Kufanelekile ukuba isetyenziswe kwiikhitshi ezincinci njengoko ikhanyisa ngokukhawuleza indawo. Isebenza kakuhle kwiikhikhini ezinkulu kuba iyayandisa inkangeleko kwaye iqhinga lokuphilisa amagumbi amnyama.
Ukuguquguquka kunye nokuguquguquka. Umntu akanakuze ahambe gwenxa ngemiphezulu yeetafile zegranite emhlophe njengoko zihambelana phantse nantoni na. Inokuhambelana okukhulu kulo naluphi na uhlobo loyilo, ukugqitywa kwekhabhinethi kunye nombala wodonga. Ukuba isetyenzisiwe kunye neekhabhathi ezimnyama, zibonelela ngokwahlukileyo okumangalisayo. Ukuba idibene neekhabhathi ezimhlophe, yaphula i-monotony yokujonga. Ikwancedisa nawuphi na umthunzi webala lomthi. Uhlobo lwesilumko, lulungile ngaphakathi ngaphakathi kunye nokhetho oluphezulu kumakhaya anamhlanje. Umhlophe ngumbala oguqukayo, kwaye ekubeni igranite emhlophe inezinto ezahlukileyo ukusuka ku-beige, brown, golide kunye grey, le mixube yemibala iyenza ilungeleke kakhulu kuzo zonke iiphalethi zombala ongaphakathi.
Ngaphandle kwezibonelelo ezibonelelwa yigranite emhlophe, gcina engqondweni ukuba kukho ezinye iingozi zokusebenzisa le nto. Enye igranite emhlophe inentsimbi edibanisa okanye irusi ngokulula. Amabala ayabonakala ngakumbi kwiindawo ezimhlophe endaweni yemibala emnyama. Kwakhona khumbula ukuba njengayo nayiphi na enye inyengane, kufuna ukutywinwa ngamaxesha athile ukuthintela nakuphi na ukuchitheka kunye namabala okungena kwi-countertop yakho. Ukuba ufuna ukwenza i-countertop yakho emhlophe ihlale ixesha elide, ukugcinwa kokukhusela kuyisitshixo.
Iindidi zeemhlophe zeCanite Countertops
Sisiphi isimbo sasekhitshini esihamba kakuhle ngegranite emhlophe
Nguwuphi umbala weetafile zegranite ezihamba kunye neekhabhinethi ezimhlophe
Imiphezulu yeetafile zegranite emhlophe eneekhabhathi ezimhlophe
Imiphezulu yeetafile zegranite emhlophe eneekhabhathi ezimnyama
Imiphezulu yeetafile zegranite emhlophe eneekhabhathi zetsheri
Imiphezulu yeetafile zegranite emhlophe ene-backsplash
Yeyiphi iGranite ejongeka njengeMarble Carrara emhlophe?
Nazi iindidi zegranite ezaziwa kakhulu, ezidweliswe kwilizwe lemvelaphi, indleko kunye nezinye iinyani.
IKashmir White Granite
Iimpawu: I-Kashmir White granite yeyona nto ithandwayo yigranite emhlophe. Inenkangeleko yetyuwa kunye nepepile ebonakaliswa ngumxube we-feldspar emhlophe, i-grey ash quartz kunye ne-mica emnyama. Ngamanye amaxesha ikwanombala obomvu omnyama ovela kwi-garnet. Olu hlobo lwegranite lukhetho oludumileyo lwekhitshi yanamhlanje. Ikwayinto enobunkunkqele njengoko isebenza kakuhle kuwo nawuphi na umbala wekhabhathi zasekhitshini.
Ixabiso: $ 60- $ 70 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
I-White White yaseBheteli
Iimpawu: Igranite emhlophe yaseBheteli luhlobo olumdaka oluphakathi olucaciswe ngemvelaphi emhlophe ecekeceke ngwevu okhanyayo ukuya kumacembe amnyama. Ikwabizwa ngokuba yiHartwick White, iBethal White, iBathel White, iBethal emhlophe.
Ixabiso: $ 35 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
Ilizwe lemveli: ilizwe elidibene lasemelika
I-White Spring Granite
Iimpawu: Igranite emhlophe yasentwasahlobo inenkohliso yokuhamba kuyilo lwayo ngenxa yendlela eyahlukileyo yemithambo yabamhlophe, ngwevu kunye nobomvu obunzulu. dibanisa oku kunye neekhabhathi ezimhlophe ukwenza ingxelo emangazayo yoyilo ekhitshini lakho.
Ixabiso: $ 50- $ 60 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
IBritish yaseVenetian Ice White Granite
Iimpawu: Imibala yayo ebonakalayo ngumxube ompunga okhanyayo umbala omdaka ngombala kunye nephethini yomthambo onzima omnyama. Olu hlobo lwegranite emhlophe ilungele ukongeza ubunzulu ngaphakathi kwangaphakathi okukhanyayo.
Ixabiso: $ 37 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
Umlambo iGranite emhlophe
Iimpawu: Umlambo i-White Granite ineyantlukwano ephantsi xa isiza kwipateni yayo ye-veining. Imithambo ihlala ikhanya ingwevu emnyama ngombala we-burgundy flecks. Iyafumaneka nge-brashi, ipolishiwe okanye igqityiwe.
Ixabiso: $ 45 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu), $ 30- $ 40 ngeenyawo zenyawo nganye (2mm ubukhulu)
Iimpawu: I-Ice Blue inyengane inombala omhlophe okhanyayo umbala oluhlaza okwesibhakabhaka obonisa ipatheni ekhethekileyo yemithambo emdaka, engwevu kunye emnyama. Uyilo lwayo luthe lwaphaphatheka ngenkangeleko eyenza ukuba yahluke kulo naliphi na elinye ilitye lendalo. Kukulungele ukuba kudityaniswe nekhabhathi enombala okhanyayo.
Ixabiso: $ 60 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
Ice Ice Granite
Iimpawu: Igranite emhlophe emhlophe ibonisa indibaniselwano yemigca yegolide kunye nomdaka omnyama, amalahle kunye nemithambo emnyama. Lo mahluko umangalisayo ngombala wenza ukuba ulungele uluhlu olubanzi lokugqitywa kwekhabhinethi.
Ixabiso: $ 45 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
Iimpawu: I-Dallas igranite emhlophe ine-grays ekhanyayo kunye neethowuni ezincinci ze-lavender ezixutywe nekhilimu egolide kunye nomdaka. Ipateni yayo yokutyabeka inkulu kwaye ixutywe namakristali amnyama abonakalayo. Ihlala isetyenziselwa imiphezulu yeetafile yekhitshi.
Ikhitshi yanamhlanje enepeninsula kunye ne-Dallas emhlophe imiphezulu yeetafile
I-Ivory Cream Granite
Iimpawu: I-Ivory Cream inyengane i-beige ngakumbi ekukhanyeni okumdaka ngombala kunokuba mhlophe. Inomdibaniso wegolide, umbala omdaka, umbala omdaka kunye nemikhonto emnyama yezimbiwa. Olu hlobo lwegranite emhlophe ilungele ukongeza ubunzulu kunye nokufudumala kwindawo. Ndwendwela eli phepha ngaphezulu I-countertop ye-beige granite izimvo.
Ixabiso: $ 40 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
I-Granite emhlophe emhlophe
Iimpawu: Yigranite emhlophe ecoliweyo enamachaphaza e-ocher eqaqambileyo kunye negranules emnyama enemibala. Iitoni ezingwevu nazo zibalasele kolu hlobo lwelitye. Olu hlobo lwegranite emhlophe lunokudityaniswa ngokufanelekileyo ngomthi okhanyayo, ukhilimu okanye iikhabhathi ezimhlophe.
INyanga emhlophe yeNyanga
Iimpawu: Inyanga emhlophe igranite yigreyite ecoliweyo enepateni ebanzi. Inamachaphaza amnyama kunye ne-swirls yeendlovu eziqaqambileyo ezixutywe nesilivere, ngwevu, mnyama kunye nokuthsintsha kwemibala eluhlaza. Ikwabizwa ngokuba yiBacca Bianca, i-Emerald White, iKashmir Pearl okanye iMist Morning Mist.
Ixabiso: $ 30- $ 32 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
Super Granite emhlophe
Iimpawu: Imabhile emhlophe namhlophe emhlophe enokubonakala okumangalisayo kwemithambo. Ikwabizwa ngokuba kukukhanya kwenyanga okanye iWhite Fantasy. Yongeza ubuhle kuyo nayiphi na ikhitshi xa isetyenziswa njengendawo yokuphamba.
I-Alaska emhlophe iGranite
Iimpawu: Le granite imhlophe inomxube wesilivere emthubi kunye ne-frosty whites, exutywe ne-neutron efudumeleyo kunye ne-onyx hues. Lukhetho oluthandwayo kubanini bamakhaya kuba longeza ukubengezela kuyo nayiphi na indawo. Ikwabizwa ngokuba yiAlaskan White okanye i-Ice Brown. Olu hlobo lwegranite lwenza eyona ndawo kugxilwe kuyo ukuze uqiniseke ukuba uyidibanise neekhabhathi ezimhlophe.
Ixabiso: $ 25 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
IGreen Granite emhlophe
Iimpawu: Ikwabizwa ngokuba yiFloratta White, White Latinum, Bianco Galaxy Granite okanye iGlass Weiss Granite. Igranite emhlophe ene-quartz eguqukayo kunye nemicah emnyama. Iitoni zayo zomhlwa nazo zivela kubukho beeburgundy specks elityeni. Olu hlobo lwegranite lusebenza kakuhle ukuba ufuna ukongeza imvakalelo efudumeleyo ekhitshini lakho.
Ixabiso: Iidola ezingama-40 ukuya kuma-43 ngeenyawo zenyawo (3mm ubukhulu)
Iimpawu: Umbala osisiseko wolu hlobo lwegranite umhlophe kwaye ungwevu opholileyo, odityaniswe nesilivere enamafu kwaye unikezelwe ngamachaphaza amnyama. Ikwabizwa ngokuba yi Cotton White, Balthus okanye White Antique.
I-Tiger yesikhumba iGranite
Iimpawu: Njengoko igama libonisa, ipateni yayo yokuthambisa ifana nolusu lwengwe. Inombala osisi okhilimu kunye nombala omdaka oqaqanjiswe yimigca emdaka namnyama. Eyona nto ibhangqwe kakuhle kunye neekhabhathi ezinemibala ekhanyayo ukuze ungagqithisi ndawo. Bona Okuninzi inyengane emnyama izimvo apha.
Ixabiso: I-22 ukuya kwi-25 yeedola ngeenyawo zenyawo (3mm ubukhulu)
izihlangu zomtshato wedge zomtshato
IEksodus White Granite
Iimpawu: Yigranite emnyama emnyama nomhlophe ephawulekayo eneenguqu eziphezulu zombala omdaka, omnyama, nokungwevu. Eyona ndlela isetyenzisiweyo kugqatso olugudisiweyo kuzo zombini izixhobo zangaphakathi nangaphandle. Kwakhona kwaziwa ngokuba yiBranco Exodus.
Ixabiso: $ 30 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
IViscount White Granite
Iimpawu: Umbala wayo osisiseko umhlophe ngombala ongwevu ongwevu kwaye ugxininiswa yimithambo emnyama nengwevu. Olu hlobo lwegranite lufana nemabhile ngenxa yendlela yokuthambisa.
Ixabiso: Iidola ezingama-40 ukuya kuma-60 ngeenyawo zenyawo nganye (3mm ubukhulu)
White Granite ePhakamileyo
Iimpawu: Inemvelaphi emhlophe enesilivere elula, imithambo engwevu kunye emnyama. Ukuba kuvavanywa ngokusondeleyo, i-burgundy flecks ikhoyo kweli litye.
Ixabiso: $ 45- $ 50 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
Iimpawu: Ikwabizwa ngokuba yiBlanco Diamante, inemvelaphi epholileyo emhlophe nengwevu enekhephu njengamabala amnyama angwevu, ukhilimu omnyama kuyo yonke indawo. Xa udityaniswe nekhabhathi emhlophe okanye emhlophe, yenza indawo egxile ekhitshini lakho.
Ixabiso: Iidola ezingama-40 ukuya kuma-45 ngeenyawo zenyawo (3mm ubukhulu)
Iimpawu: Olu hlobo lwegranite emhlophe lubonisa iithoni ezimhlophe ezipholileyo kunye nokugcoba okuqaqanjiswe ngesilivere ebengezelayo, ioniks kunye namachaphaza amhlophe eqabaka. Ikwabizwa ngokuba yiBlanco Galia okanye iBlanquino.
Ilizwe lemveli: Speyin
Iimpawu: Ikwabizwa ngokuba yi-Spectra White. Uphawu lombala opholileyo omhlophe nengwevu uzaliswe yimithambo yegolide eshushu. Inkangeleko yayo eyahlukileyo yenza eli litye lendalo lilungele iintlobo ezahlukeneyo zoyilo.
I-White Torroncino Granite
Iimpawu: I-beige ephawulekayo, i-granite ebomvu kunye nomhlophe kunye neenguqu eziphezulu kunye ne-veining. Ikwabizwa ngokuba yiBianco Torroncino Granite .
I-St Cecilia White Granite
Iimpawu: Olu hlobo lwegranite luyigolide enkulu kunamhlophe ngenxa yezigidi zeminyaka ye-oxidation. Nangona kunjalo, ukuba lityhoboziwe nzulu, eli litye linokubonakala limhlophe ngakumbi. Iqukethe imvelaphi enhle ye-beige kunye ne-burgundy, igolide kunye nemithambo emnyama engwevu. Ikwabizwa ngokuba yiGiallo Cecelia, iSanta Cecilia, iSt. UCecilia Classic. Xa isetyenziselwa imiphezulu yeetafile, yongeza ubunzulu kunye nobushushu kuyo yonke inkangeleko yekhitshi lakho. Olu hlobo lwegranite lulungele izinto zangaphakathi zaseRustic nakwilizwe.
Iimpawu: Inembonakalo yegolide egudileyo ngokubanzi ngaphandle kombala wayo omhlophe nengwevu. Igcwele umbala omdaka ukuya kumbala omnyama wezimbiwa ezongeza ukukhanya kwayo. Ikwabizwa ngokuba yi-Branco Ornamental. Olu hlobo lwegranite emhlophe lunokudityaniswa ngombala wekhabhathi omnyama ngokwahluka okuthambileyo. Ubukho bezimbiwa ezimnyama ekwakhiweni kwayo kukwaxhasa imibala yekhabhathi emnyama.
Ixabiso: $ 20 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
Umqhaphu White Granite
Iimpawu: Inesiseko esimhlophe ngemithambo engwevu ekhanyayo kunye neentsimbi ezintle ezimnyama zezimbiwa kuyo. Uhlobo lwethranite lukhangeleka luthambile kulo. Ukuba ujonge ukukhanya, ikhitshi elinomoya, bhangqa oku kunye neekhabhathi ezimhlophe njengoko ziya kuqinisekisa ukuba nasiphi na isithuba sikhangeleka sicocekile kwaye sicocekile. Amanye amagama eshishini nguBranco Cotton, uBlanco Algodon, uMqhaphu oMhlophe, uBranco Ceara noCeara White
Antique emhlophe Granite
Iimpawu: Olu hlobo lwegranite lunombala omhlophe osisiseko kunye nokuqaqamba okumangazayo kwegrey kunye nobhedu olukhanyayo. Iimpawu ezimnyama zeeminerali zongeza uphawu kweli litye. Njengoninzi lwegranite emhlophe, ibhetyebhetye ngokokuyilwa njengoko inokudityaniswa nayo nayiphi na imibala yekhabhathi yekhitshi.
Ixabiso: $ 30 ukuya kwi-40 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
Iimpawu: Luhlobo lwelitye elinombala omhlophe osisiseko esinee-quartz ezinkulu, iidipozithi ezimdaka ngombala, iingcebiso ze-burgundy garnet kunye ne-mica emnyama ethe saa kakhulu ejikeleze umphezulu welitye. Ukujongwa kwelitye ngokubanzi yibhedu encinci kunye nesinyithi.
Granite emhlophe ngokugqibeleleyo
yintoni isipho seminyaka engama-25 somtshato
Iimpawu: Iyaziwa ngokuba yiAlpine Star Granite, le granite imhlophe ineempawu eziphakathi zombala ongwevu nomnyama. Olu hlobo lwesitafile segranite silungele ukukhanya kwikhabhathi enombala ophakathi. Ikwabizwa ngokuba yi-G439 Granite.
Ixabiso: $ 20 ukuya kwi-25 ngeenyawo zenyawo nganye (3mm ubukhulu)
Isanti emhlophe Granite
Iimpawu: Iqukethe izinto eziqaqambileyo zegolide kunye ezimdaka ngokubhekisele kwimvelaphi emhlophe emhlophe. Olu hlobo lwegranite emhlophe luzalisekisa imibala yekhabhathi yokhuni.
Ixabiso: $ 25- $ 35 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
IHimalaya White Granite
Iimpawu: Unombala omhlophe oseludongeni ogcwele imibala emhlophe engwevu namnyama. Lo mbala wegranite ubhetyebhetye kwaye unokusetyenziselwa ukuthelekisa ukukhanya, okuphakathi ukuya kumbala omnyama wekhabhathi.
Mhlophe Mist Granite
Iimpawu: Yigranite ecoliweyo, engeniswe evela e-China, ebonisa i-onyx kunye ne-alabaster dappling. Iithoni ezingwevu ngumbala wayo obalaseleyo kwaye ilungele ukudala umahluko kwikhabhathi emhlophe okanye ekhanyayo ekhitshini. Amanye amagama alolu hlobo lwegranite yi-Spray emhlophe, iSurf White, iWave yaManzi kunye neWhite Wave.
Iimpawu: Yigranite emhlophe emhlophe kunye engwevu eneempawu zee-beige kunye namalahle. Ikwabizwa ngokuba yiBlanco Gabrielle okanye i-Snow Flakes Granite. Eyona nto ibhangqiweyo nekhabhathi emhlophe yolwahluko olwahlukileyo ekhitshini.
Iimpawu zeGreen Granite ezimhlophe
Iimpawu: I-granite emhlophe ukuya kumbala omdaka ngombala ocekeceke wokukhanya okungwevu kunye nemithambo emdaka ekhanyayo enika ubunzulu.
Ixabiso: $ 70- $ 75 ngeenyawo zenyawo nganye (3mm ubukhulu)
Iimpawu: Olu hlobo lwegranite emhlophe lisebenza kakuhle nekhabhathi emhlophe. Inesiseko esimdaka ngombala nesimhlophe esigutyungelwe yimithambo emnyama kunye nokugqabhuka kwe-burgundy. Yisibini esifanelekileyo sokukhanya ukuya kwinqanaba eliphakathi lokugqiba ikhabhinethi.
Ixabiso: $ 39 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
Ilizwe lemveli: IBrazil ne China
Andromeda Granite emhlophe
Iimpawu: Imvelaphi emhlophe e-creamy iyanconywa yimifuno epholileyo epholileyo yelifu kunye ne-mahogany ecwecwe i-onyx speckles. I-Andromeda White lukhetho olufanelekileyo lokongeza ubuhle nakweyiphi na indawo.
Ixabiso: Iidola ezingama-60 ukuya kwi-75 zenyawo zenyawo nganye (3mm ubukhulu)
Ilizwe lemveli: esri Lanka
I-White Granite iPiracema
Iimpawu: Ikwabizwa ngokuba yiBranco Piracema kunye nePiracema Grey Stone Granite. Umbala wawo ngokubanzi ngumxube opholileyo ukuya kokuphakathi ongwevu mhlophe kunye nemibala emihle emnyama.
Ixabiso: $ 21 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
I-Venetian White Granite
Iimpawu: Ikwabizwa ngokuba yiVenetian Ice Granite kunye neBranco Venetian, olu hlobo lwegranite lunepateni ebukekayo kodwa ethe-ethe. Lilitye elibonakaliswa ngombala walo wegolide. Imithambo yayo engwevu emnyama nomnyama ixutywe ngokungafaniyo nekhrimu yayo kwisiseko esimthubi esenza ukuba ilungele zombini iikhabhathi ezikhanyayo nezimnyama.
Ixabiso: $ 35- $ 45 ngeenyawo zenyawo nganye (3mm ubukhulu), $ 20- $ 30 ngonyawo wesikwere (2mm ubukhulu)
Iimpawu: Igranite emhlophe emhlophe ebonakala ngombala omhlophe onemibala egcwele imibala emihle emnyama kunye nemithambo embalwa engwevu epholileyo. Kukhethwe kakhulu kwiikhikhini zala maxesha ngenxa yokulula.
Ixabiso: $ 44 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
Iimpawu: Amanye amagama aqhelekileyo kushishino nguBarry White, uBaso White, uBianco Amoy, uBianco Cordo, uBianco Crystal, uBianco Gamma, uBianco Gordo, ukubala nje abambalwa.
Ixabiso: $ 55 ngonyawo wesikwere (3mm ubukhulu)
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, igranite emhlophe yinto ebhetyebhetye ehamba nayo nantoni na. Inikezela ngamathuba angenasiphelo kuyilo kwaye inokusetyenziswa ukuthelekisa nawuphi na umxholo ekhayeni lakho. Isetyenziselwa ikakhulu izitayile zodidi ngenxa yobuhle obungapheliyo obuvelayo, kodwa inokufikelela kwi-vibe yanamhlanje. Khawukhumbule nje ukudibanisa kunye nohlobo olufanelekileyo lwekhabhathi ukufezekisa ukubonakala kwakho.
Ukufezekisa isitayela seklasikhi, khetha i-granite emhlophe eneepatheni zokugcoba ezifana ncam nemarble. Kwiikhitshi ezinemixholo ye-rustic, khetha igranite emhlophe enethoni eshushu kuyo ke jonga into enombala omdaka nobomvu. Kwelinye icala, isitayile sanamhlanje silungelelaniswe ngakumbi kwaye sicocekile. Ukufezekisa oku kujongeka, hlanganisa uyilo olulula lwekhabhathi kunye negranite emhlophe enepateni ephantsi eyahlukileyo kunye nemithambo engaphantsi yemithambo.
Xa ukhetha ukuba loluphi uhlobo lwegranite emhlophe ehamba neekhabhathi ezimhlophe, akukho mida ngenxa yokuba umhlophe ngumbala wobungqina osilelayo.Akukho granite ngumbala omnye kuphela ngenxa yoko kunzima ukufumana igranite emhlophe ecace gca. Ubukho bomxube wemibala kumphezulu wayo kwenza ukuba kube lula ukusebenza.
Wazi njani ukuba yeyiphi eyona isebenza kakuhle? Ngokwenene ixhomekeke kwisitayile okanye ujonge ukuba ufuna ukufezekisa. Ukulungelelanisa kungekuphela kombala wekhabhinethi kunye nombala we-countertop kodwa uqwalasele yonke imiba kunye neempawu zekhitshi lakho. Yazi indlela esele ikho yekhaya lakho kwaye ubone ukuba uyafuna ukunamathela kuyo.
Igranite emhlophe inokunika umahluko kwiikhabhathi ezimhlophe ngenxa yeepateni zayo ezizodwa. Ukuba ufuna ukufezekisa ukujonga okucocekileyo, khetha igranite emhlophe enepateni ephantsi eyahlukileyo. I-White Ice Granite, i-White River Granite kunye neKashmir Granite umzekelo, lukhetho oluhle ngombala wekhabhathi wekhitshi yokudibanisa nekhabhathi ezimhlophe. Ukuba ufuna ukongeza imfudumalo kwimo yonke yekhaya lakho, dibanisa iikhabhathi ezimhlophe ezinohlobo olukhanyayo lweSanta Cecilia Granite. Bona ezinye iintlobo ze imibala lenyengane ukukhetha apha.
I-White Alpha Granite eneekhabhathi ezimhlophe
Ukusuka kumfanekiso ongentla uyabona ukuba amachaphaza amnyama kunye nemithambo kwi-White Alpha lenyengane inika umahluko ofunekayo ukudityaniswa neekhabhathi ezimhlophe, ngaphandle koyilo lwasekhitshini olujongeka lumhlophe kakhulu ngokubanzi.
Ukubongeza ngokulula ubomi kwikhabhathi emhlophe yasekhitshini emhlophe yokuphamba kwekhitshi, khetha igranite enepateni ephezulu kunye nemithambo emnyama. Umahluko wenza ukuba i-counter top ibonakale ishiya indawo egxile ekhitshini lakho. IAlpine White, iDelicatus White kunye noBusika obuMhlophe yimizekelo yegranite emhlophe enokunceda ukufezekisa oku kujongeka.
Ukuthintela ukunika ikhitshi yakho indawo emnyama neyoyikisayo, qiniseka ukuba udibanisa ikhabhathi emnyama kunye negranite emhlophe enokukhanya kumbala ophakathi. Ityuwa yodongwe kunye nepepile lenyengane ilungile ekudaleni umahluko omkhulu kumakhitshi amnyama nagrey. Yaphula ubunzima bendawo kwaye ungagqithisi ndawo ngeplite emhlophe ebunjiweyo. I-Aspen White, iAndromeda White, iNyanga emhlophe kunye neBianco Romano zezinye zeendlela onokukhetha kuzo.
I-Cherry ngumbala obomvu omnyama ogqityiweyo oqhele ukusetyenziswa kwikhabhathi yekhitshi. I-Cream enemibala yokukhanya okukhanyayo okumhlophe okumhlophe kolu hlobo lwekhabhathi yekhitshi. Xa zidityaniswe kunye, zenza iindawo ezivusa ubushushu kunye noxolo. Ihlala isetyenziswa kwilizwe okanye kwiikhitshi ezinemixholo. Yibhangise ngeethayile ezinemibala ekhanyayo yomgangatho kwaye ngokuqinisekileyo uya kulwenza ngakumbi igumbi. Olunye ukhetho olufanelekileyo lwegranite emhlophe yeekhabethe zeCherry yiWhite Sand Granite, iAntico Cream kunye neAlps White.
Iithayile zikaMoses ziyathandeka kwaye zisebenza ngokubuyela umva kwezinto ezinokudityaniswa neetafile ezimhlophe zegranite. Xa ukhetha umbala we-backsplash osekunene ukuze utshatise kunye ne-countertop yakho, jonga ngononophelo umbala osisiseko kunye nemibala ye-aksenti efumaneka kwipateni yegranite emhlophe uze ulungelelanise oku kunye. Isikhokelo sesitayile esibalulekileyo sokugcina engqondweni kukuba ungaze uyile uyilo. Gwema ukudibanisa igranite emhlophe enepatheni enemibala enemibala njengoko ithande ukugqithisa inkangeleko yendawo. Ukufumana ezinye izimvo zoyilo jonga igalari yethu ye iintlobo zeetafile Apha.
Igranite emhlophe kunye nemabhile emhlophe zinokufana ngokungaqhelekanga kodwa umahluko ngokwenyani uphakathi kwamacandelo awo. Izimbiwa ezikhoyo kulwakhiwo lwazo zenza iipropathi zazo zahluke kodwa ngokubonakalayo zinokubonakala zididekile ngokufanayo.
Kuba igranite yenye yezona ndawo zinzima emhlabeni, yomelele ngakumbi kunemarble. I-Quartz kunye ne-feldspar zinika uzinzo lwayo igranite, ngelixa ubukho bezinto ezinobuncwane ezinje ngecalcite zenza ukuba ibhastile lingabinakonakala. Icala elisezantsi lokusebenzisa imarble kukuba iphendula ngokulula kwiiasidi. Xa idibana nokutya okune-asidi kwindalo, amabala amdaka ashiyekile kumphezulu wayo okwenza ukuba ibe liliso elingathandekiyo. I-Granite ikwangaphezulu kwimabhile xa isiza kubomi obude kwaye ifuna umgudu omncinci wokuyigcina.
Ixabiso elichanekileyo, i-granite ithambekele ekubeni lutyalomali olungcono kwikhaya lakho kuba iya kuhlala ixesha elide. I-Granite lukhetho oluhle ngakumbi kunemabhile, nangona izinto ezininzi zinokuchaphazela amaxabiso ayo. Ngokubonakalayo, igranite emhlophe kunye nemabhile emhlophe zombini zongeza ubuqaqawuli obungapheliyo nakwesiphi na isithuba kuba bobabini benika iklasi kunye nobuhle. Ngokubanzi, inyengane yeyona ndlela ifanelekileyo yemarble.
UMarble Carrara Marble, umzekelo, sesinye sezinto zokwakha ezinokufakwa endaweni yegranite. ICarrara marble luhlobo oluphezulu lweemabhile ezimhlophe ezinombala ongwevu oluhlaza kwaye ujongeka ngokwahlukileyo ngombala omhlophe noboya. Luhlobo oludumileyo lweemabhile njengoko belusetyenziswa kwimifanekiso eqingqiweyo eyaziwayo kunye nakwizakhiwo ezibonakalayo ezinjengePantheon kunye neMichelangelo's David. Kuqhelekileyo kusetyenziselwa ukwakhiwa kwezinto zangaphakathi nangaphandle, kunye neekhitshi zokubala ekhitshini yenye yezicelo zayo.
Phakathi kweentlobo zegranite, yeyiphi esebenza ngokukuko njengenye yeWhite Carrara Marble?I-White Carrara Marble intle kakhulu kodwa iGranite emhlophe ikulungele ukuthelekisa. Kukho iindlela ezininzi ezikhoyo kwimarike, nantsi isishwankathelo sokhetho oluphezulu:
IBianco Romano Granite -Ngoyena mntu ubangisana naye obambeleyo kwi-White Carrara Marble kuba zijongeka ngokufanayo. Xa ubekwe kwicala elinye neCarrara, phantse kunzima ukwahlula umohluko wabo. Ikwanayo ipatheni emhlophe yegrey kunye nomhlophe emhlophe efana neCarrara. Ukubonakala kweBianco Romano Granite kufana noko kweCarrara Dark (i-veining eninzi) kunye neCarrara Medium (i-veining encinci).
Beola Ghiandonata Granite -Lolu hlobo lubonakala lufana nemabhile kunegranite kwaye inepateni efanayo yokuhamba grey ye-White Carrara. Kungwevu ngakumbi kunombala omhlophe, ke abanye basenokungakuqwalaseli oku ukuba ufuna ukubonakala okumhlophe ngokugqithileyo.
Glacier White Granite -Ingwevu ngombala osisiseko esimhlophe ogcwele imingxunya efana nemithambo yemabhile. Ukwahluka okumnyama okungwevu kuza nephethini yegranite enamanzi ngakumbi.
I-White House Granite -Impembelelo yayo yokuthambisa ifane nezibuko zemarble kodwa inesiseko esingwevu ngakumbi kuneCarrara.
Ndwendwela eli phepha ukuze ubone igalari yethu imiphezulu yeetafile lenyengane ukugqitywa okungaphezulu, iintlobo zomphetho kunye nemibala.
yeyiphi ipesenti yeendwendwe ezimenyiweyo eziza emtshatweni
Ukutshintsha kwegama elisemthethweni kwi-nc
plus ubukhulu bomama weengubo zomyeni
igumbi elimfusa okhanyayo